सुन्दरदुलारी उद्योग वाडीज्य संघका अध्यक्ष कार्कीको दाबेदारी प्रदेशमा ! - itaharinews
सुन्दरदुलारी उद्योग वाडीज्य संघका अध्यक्ष कार्कीको दाबेदारी प्रदेशमा !
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र ३१, २०७४ समय: ९:२६:१५
ईटहरी भदौ ३१ गते । सुन्दरदुलारी उद्योग वाडीज्य संघका अध्यक्ष किसोर कार्की मोरगं क्षेत्र नम्वर ६को प्रदेसमा आफ्नो दावी रहेको वताएका छन् । नेपाली काँग्रेसको राजनीती गर्दै आएका कार्की सफल ब्यवसायी र ब्यवसायीहरुको नेता रहेका छन् । पार्टीको साँगठनीक गतीविधीमा निक्कै महत्वपुर्ण मुमिका निर्वाह गर्दै आएका कार्की, आफु प्रादेसमा उठ्ने वताएका छन् । कार्कीले सम्मन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रैसको तर्फका उमेद्धवार जिताउन सक्दो सहयोग गरेका थिए । कार्कीले अहिले सम्म पार्टीले गरेको निर्णयमा कुनै विमती नजनाई सहयोग गर्दै आएको र अव भने पार्टीले पनि आफ्नो पनि मुल्लाङ्घन गर्नु पर्ने वताएका छन् ।
नेकपा एमालेको कब्जै तस्तो रहको सावीक सुन्दरदुलारीमा उद्योग वाडीज्य संघको स्थापना गरी अध्यक्ष भएर सामाजीक संस्थामा काँग्रेसको विउ रोपेका कार्कीले समाजमा सँगठनको उपस्थीती जनाएका थिए । वामपन्थीहरुको चंगुलमा रहेको समाज, सामाजीक सँघसंस्थाहरुको विचमा उद्योग वाडीज्य सँघको संस्थापक भई काँग्रैस पनि समाजको विकास प्रेमी पार्टीको अनुभुती दिलउन सफल भएका थिए ।
कार्कीकै पहलमा सावीक सुन्दरदुलारी नगरमा उद्योग वाडीज्य सँघ स्थापना भएको हो । नगरभरी छरीएर रहेका ब्यापारीहरुलाई एउटै छातामुनी ल्याउन कार्कीले निकै मेहनत गर्नु परेको थियो । भरखर गाउबाट सहरउन्मुख हुदै गर्दाको अवस्थामा रहेका ब्यापारीहरुलाई उद्योग वाडीज्य संघकै पहलमा करको दायरामा ल्याईएको थियो । कार्कीले ब्यवसायीहरुलाई निर्धक्क भएर ब्यापार गर्ने बातावरणको सृजना गराएका थिए ।
ब्यवसायीहरुको सफल र कुसल नेत्रीत्व समाली सकेका कार्कीले आगामी मंसीरमा हुने भनीएको निर्वाचनमा प्रदेशमा आफ्नो दावी रहेको वताएका छन् । हाल निर्धारण गरीएको सिमाङ्घनको आधारमा पनि कार्कीले स्थानीय जनता उनको पक्षमा रहेको दावी गर्दौ आफ्नो दावेदारी रहेको वताएका छन् । प्रदेशको निर्वाचनमा सुन्दरहरैचाका ६ वटा वडा र वुढगिंगा गाउपालीकाको ६ वटा वडा रहने छन् । दुवै नगर र गाउपालीकामा नेपाली काँग्रेसको वलीयो पक्कड रहेको छ ।
समाजको हरेक क्रयिाकलापमा सरिकहुने र सवैलाई सहयोग गर्ने कार्कीको स्वभावनै उनको वलीयो पक्ष्य रहेको छ । उनि सवै उमेरसमुह सँग छिटै घुलमिलहुन सक्ने सक्षम नेता मानीन्छन् । उनि युवा समुहका रोजईका नेता पनि रहेका छन् । उनले नगरको विकास र स्तर उन्नतीमा सदैव अग्रसर रहेर आफ्नो भुमीका निर्वाह गरेका छन् ।
नेपाली काँगे्रसको सक्रिय राजनीती गर्दै आएका किशोर कार्कीले आफुलाई प्रदेशको एक मात्र वलीयो उमेद्धवार रहेको दावी गरेका छन् । सदैव स्थानीय जनताको घर दैलोमा उपस्थीती भई सरसहयोग गरेको वताउदै ,“काम गर्ने कालु अनि मकै खाने भालु” अवको रानीतीमा नहुने वताएका छन् । कार्कीले काँग्रेस देशकै ठुलो पार्टी रहेको र जनता लाई यो पार्टी प्रती निकै ठुलो विश्वास पनी रहेको वताएका छन् । उनले काँग्रेस निरन्तर ठुलो पार्टी रहनको लागी निर्वाचन क्षेत्रमा विकाश गर्ने र जनताको रोजाईको नेता हुनु पर्ने तर्क गरेका छन् । कार्कीले यो १ चुनावले नै अवका चुनावमा पनि जित्ने बाटो वनाउने भन्दै सक्षम र योग्य लाई निकै गम्भीर भएर चुन्न अनुरोध गरेका छन् ।